Madaxda Soomaaliya oo tacsi u diray ehelada dadkii wax ku noqday weerarkii maanta ee Beledweyne – Radio Daljir
Nofeembar 19, 2013 4:18 b 0
Muqdisho, November 19, 2013 – Qoraal ka soo baxay xafiiska madaxweynaha Soomaaliya mudane Xasan sheikh Maxamuud ayaa lagu canbaareeyey weerarkii maanta ay kooxda Al-shabaab ku qaaday saldhiga Beledweyne, iyo weliba qarax ismiidaamin ah oo weerarkaas ka horeeyey.
Madaxweynaha Soomaaliya ayaa tacsi u diray ehelada dadkii ku dhintay qaraxa iyo weerarka maanta, sidoo kale Ra?isal wasaare Saacid ayaa isna ?tacsi u diray ehelada qoysaskii wiilashooda iyo gabdhahooda ku waayey weerarkii maanta.
Askar isugu jira Soomaali iyo kuwa ka yimi Jabuuti ayaa dhintay, lamase cadayn karo tirada rasmiga ah.
War kooban oo ka soo baxay xafiiska madaxweynaha isla markaasna weerarka lagu canbaareeyey ayaa lagu sheegay in kooxda Al-shabaab ay is dhintay awooddii ay ku lahayd Soomaaliya, ururka ayaa lagu tilmaamay kuwa fuliya weeraro gaadmo ah keliya xilligan.
?Waxay fulinnayaan weeraro gaadmo ah iyo qaraxyo, ma jirto wax xushmad ah haba yaraatee oo ay u hayaan bini?adamka.? Qoraalka ka soo baxay madaxtooyada ayaa lagu sheegay sidaas.
Al-shabaab waxay sheegeen in ay weerareen maanta saldhiga booliska ee degmada Beledweyne, ururka ayaa sheegay in ay dileen askar badan oo isugu jira Soomaaliya iyo kuwa AMISOM, mase sheegin tiro rasmi ah.
Beledweyne waxaa haatan ka socda baaritaano ay wadaan ciidamo dowladda federaalka ah ee Soomaaliya iyo kuwa Jabuuti.